Homeराष्ट्रिय खबरटेम्पो चालकले तिर्न सकेनन् घरभाडा, घरबेटीले बोलाए प्रहरी
काठमाडौं: कमलपोखरी बस्ने ५३ वर्षीय ललितबहादुर सुनुवार विगत १६ वर्षदेखि इमाडोल–रत्नपार्क रूटमा टेम्पो चलाउँछन्। साहुको टेम्पो चलाएरै कमाएको मासिक ३०–३५ हजार रूपैयाँले परिवार पाल्दै आइरहेका थिए। छोरोलाई पनि टेम्पो समितिकै रसिद काट्ने ठाउँमा जागिर लगाइदिएपछि उनको बोझ धेरै घटेको थियो।
को’रोना महामारी संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि भने उनको घरमा सबै आयश्रोत ठप्प छ । ‘अब न छोराको रोजगारी छ न मेरो। महिनाको १० हजार रूपैयाँ कोठा भाडा तिर्नु त परै जाओस्, ग्यास-चामल किन्ने पैसा समेत छैन,’ सुनुवारले भने। पैसा तिर्न नसक्दाको बोझ त छँदै थियो। त्यसमाथि झमेला पनि थपियो। लामो समयसम्म घरभाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले प्रहरी नै बोलाइदिए।
उनको घरमा एक सिलिन्डर ग्यास र रासनको नाममा १ बोरा चामल मात्रै बाँकी छ। ‘समितिले राहत त दिएको थियो तर त्यसले कति दिन धान्छ र! बरू काम गर्न पाए कसैले दिएको राहत चाहिन्थेन,’ सुनवार भन्छन् । सेतोपाटिमा सुधिर भण्डारीले लेख्नु भएको छ ।
एका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गर्दै भाद्र २३ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस !
Kamagra Recensione buy cialis professional